जीवनशैली – Page2– America Nepal
छोरी जन्माउन तयार हुन्छौ त ?
माघ २७, २०७३- मेनुका राइको प्रश्न, दयाहाङको जवाफ चलचित्रको छायांकनमा व्यस्त रहँदा हामीलाई कत्तिको सम्झनुहुन्छ ? सम्झिन्छु...जति सम्झिन्छु त्यति देखाउनचाहिँ सक्दिनँ । तिमी र म फोनमा जति कुराकानी गर्छौं नि, त्यतिले नै आफूलाई सम्हाल्छु । काठमाडौंभित्रको छायांकनमा बढी रमाउनुहुन्छ कि काठमाडौंबाहिरको ? काठमाडौंकै छायांकनमा रमाउँछु, घरबाट टाढा हुनु पर्दैन नि ।
छोरीको माया मारेर बन्दुक समातेँ
राजनीति नै किन रोज्नुभो ? समाजमा देखिएको उत्पीडन, सामन्तको दमन, पुलिस प्रशासनले हुनेखानेकै पक्षमा फैसला गर्ने परिपाटी, अनि महिलालाई दुःख दिने सामाजिक संस्कारले पीडाबोध भयो । यी समस्याको अन्त्य गर्ने शक्ति राजनीतिक पार्टी हो भन्ने लाग्यो । त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी प्रभावकारी हुन्छ भनेर तत्कालीन मालेको सम्पर्कमा गएँ । कति वर्षको उमेरमा लाग्नुभयो ? तेह्र वर्षकी थिएँ
म पुरुषबाट महिला बनेकी मोडल हुँ :अञ्जली लामा
नेपालकै पहिलो ट्रान्सजेण्डर मोडल अञ्जली लामा ल्याक्मी फेशन विक २०१७को टप फाइभमा एउटा अन्तरवार्तामा उनले भनेकी थिइन् ‘मेरो मुख्य लक्ष्य सुपर मोडल बन्ने हो । मोडलिङमा जुन उचाइ बनाउँदैछु, त्यसलाई सबैले स्वीकार गरे भने म अझै माथि जान्छु भन्ने लाग्छ ।’ साँच्चै आज अञ्जली लामा भारतकै सुप्रसिद्ध ल्याक्मे फेशन विक २०१७ मा टप फाइभमा पुग्न सफल भएकी छिन् । अञ्जली लामा नेपालकै पहिलो
धेरै समयसम्म मन पराएको केटीलाई आफ्नै दाईले विवाह गरेर भित्राएपछि
उनीहरुले मलाई बताएका त होईनन् तर उनीहरुको हाउभाउ र व्यवहार मेरै जस्तो भएकाले मलाई अलि सन्तोष मिलेको थियो कि संसारमा म मात्र हैन मजस्ता अरु पनि हुन्छन् भनेर । एक दुई गर्दा गर्दै जिन्दगीको ३० औ बसन्त पार गरिसके मैले । यद्यपी बसन्त त मेरो जीवनमा बाल्यकाल बाहेक कहाँ आयो र ! सदैव हिउँ परिरयो, सिरेटो चलिरहर्याे मेरो जीवनमा अनि रुखो रहिरहे म, एउटा पतझर रुखजस्तै । मेरो यस्तो भावना
सेनाको जागिर छाडेर साउदी र मलेसिया
छत्र लकाई खड्का/हाल, मलेसिया । म नेपाली सेनामा भर्ती हुँदा संकटकाल थियो । २०६१ माघ ५ गते धरानको फुस्रेमा रहेको श्री भवानी दल गुल्मले लिएको परीक्षा पास गरेर सेनामा भर्ती भएको थिएँ . तालिमका लागि सप्तरीको राजबिराजमा रहेको श्री आर्टिलरी गणमा परेको थिएँ । चैत वैशाखमा एकदमै गर्मी थियो । तर पनि तालिम त गर्नु नै पर्ने । ७ महिनाको सैन्य तालिम सफलतापूर्वक पूरा गरें । सेनाको बर्दी
मलेसियामा लुटिएको कुमारत्व
यतिबेला प्लेन मलेसियाको जमीनमा उभिएको छ, अर्थात केएलआइए एयरपोर्टमा छ अनि काठमाण्डौका लागि उडान भर्ने अन्तिम तयारी गर्दैछ । र, मचाहिँ बोडिङ्ग पासमा तोकिएको सिट च्यापेर ढुक्कले बसेको छु । प्लेनको नाम बताइदिउँ ? त्यो आफै थाहा पाउनुहुनेछ ।‘सिटबेल्ट बाँध्नुस ।’ -को निर्देशनसँगै प्लेनले भुई छाड्दै आकाशिँदैछ भने भर्खरै छाडेको जमीन सानो, अलि सानो, अनि सानो हुदै दृश्य-ओझेल हुदैछ ।
तीन वर्षीया बालिकालाई बलात्कार र हत्या गर्नेलाई ‘मेसिन गन’ ले ठोकेपछि
यमनमा एक तीन वर्षीया बालिकालाई बलात्कार र हत्या गर्ने एक व्यक्तिलाई सार्वजनिक रुपमा ‘मेसिन गन’ ले उडाइएको छ । मृत्युदण्डको यस्तो भयानक दृश्य हेर्नेमा बालिकाका बुवा याहया अल्मातारी पनि थिए जसले उनको मृत्यु हेर्दा ‘राहत र सन्तुष्ट’ महसुस भएको बताए । उनका नजिकका छिमेकी मोहम्मद अल माग्रबीलाई एके–४७ ले उडाएको दृश्य हेर्न उनीसहित हज्जारौं भीड जम्मा भएका थिए । ४१ वर्षीय
विदेशको सपनाले उनको यथार्थ लुटियो , फर्केर आउँदा छोराले भन्छ ‘आमा तिमी खराब हौ’
काँइली (नाम परिवर्तन)लाई हिजोआज छोराले ‘आमा तिमी खराब हौ’ भन्छन् । १० नातीनातिनीकी हजुरआमा आफ्नै छोराले यस्तो वचन लगाउँदा सुनसरीकी काँइलीको मन चसक्क हुन्छ । ५२ वर्षकी काँइलीलाई विदेशबाट फर्केपछि श्रीमान् र छोराले गर्ने व्यवहारले मरेको जुनी भए झैं लाग्छ । उनलाई ४ वर्षसम्म तिनै छोराछोरी र श्रीमानका लागि सहेका दुःख याद आइरहन्छ । उनले साउदीमा घर मालिकको पिटाइ र नमिठो वचन सहनु
‘श्रीमतीको इच्छा पनि स्वीकार्नुपर्छ’
वैदेशिक रोजगारीले नेपालको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पाटोमा पारेको प्रभावलाई समेटेर लेखिएको उपन्यास 'रेमिट्ल्यान्ड' सोमबारदेखि बजारमा छ । उपन्यासको विषयमा केन्द्रित रहेर यसका लेखक श्याम सिंघकसँग गरिएको कुराकानी उमेरले चार दशक नाघिसकेपछि पो उपन्यास लिएर आउनुभयो त । यत्तिका समय कता हराउनुभयो? स्कुल पढ्दै कथा, निबन्ध, कविता लेख्थेँ । लेखेका कविता, कथा, निबन्ध बुइँगलको
स्कूल पढ्दा बसेको माया
लेखक - अस्मिता गौतम ( चितवन ) स्कूल पढ्दा पहिलो नजरमा माया बसेको: उसको सबलाई आकर्षण गर्ने छड्के हाँसो अनि सबलाई मायाले बोलाउने त्यो मधुर बोली । उफ्फ! दिल त त्यही दिन देखि नै उसले कब्जा गरेको थियो उसले । समय बित्दै गयो , स्कूल पछि कलेज जाँदा छुट्टियौं हामी । न कुनै बोल्ने माध्यम थियो, न अहिले जस्तो इन्टरनेटको सुबिधा नै । सोचेको थिइन ,फेरी हाम्रो भेट होला भनेर । एकदिन अकस्मात, मेरा